FANENDAHANA NIAMPY FANOLANANA : Voasambotra teny Anosizato ny jiolahy iray
Lehilahy 01 no voasambotry ny polisy avy ao amin’ny SUT, ny alahady faha 07 jolay 2019 teo teny Anosizato, noho ny fanendahana miharo fanolanana izay nitranga ny alin’ny alahady faha 16 jona 2019 lasa teo. 10 juillet 2019
Tamin’io alahady io, tokony ho tamin’ny 08 ora sy sasany alina dia mpivady handeha hody teny Namontana no narahina lehilahy miisa 03. Nony tonga tamina toerana mangingina izy ireo dia nosakanan’ireo olon-dratsy ka nodarohan’izy ireo ilay raim-pianakaviana ka rehefa tsy nahatsiaro tena dia nariany tao anaty tatatra. Ilay renim-pianakaviana izay nitondra vohoka 02 volana an-kibo kosa dia nentin’izy ireo tamina toerana iray tsy lavitra teo ary dia naolan’izy ireo.
Sahabo ho tamin’ny 02 ora maraina vao navotsotr’izy ireo ilay vehivavy. Noho izany voina nahazo azy izany dia tonga nametraka fitoriana teo anivon’ny SUT izy mivady, ny alatsinainy 17 jona 2019. Nandritra ny famotorana dia nilaza ilay vehivavy voaolana fa tsaroany avokoa ny endrik’ireo nanolana azy noho izy ireo tsy nisaron-tava. Nandritra ny fanadihadiana ary dia fantatra ny fonenan’ireo olon-dratsy izay mpirahalahy avokoa.
Tamin’ny fandalovan’ny Polisy tao amin’izany toeram-ponenany izany anefa dia efa tsy tao intsony izy ireo. Ny alahady faha 07 jolay 2019, tokony ho tamin’ny 04 ora hariva dia nahazo vaovao avy amin’ny olona tsara sitra-po ny Polisy nilaza fa mampiady akoho ao amin’ny toerana 01 eo Anosizato ireo olona karohina ireo. Tonga faingana teny an-toerana ny Polisy ka voasambotra tamin’izany ny 01 tamin’izy 03 lahy, tafaporitsaka ary mbola karohina kosa ny 02 ambiny.